I-20 / 01 / 2020 | RayHaber | raillynews
[17 / 02 / 2020] Umgca weTram we-Eminönü Alibeyköy Uya kufikelela esiphelweni sowama-2020	34 Istanbul
Usuku: NgoJanuwari 20, 2020
I-Arhente yoPhuculo lweMeditera enguNombolo 15 kwi-Organisation of Associated, Ehambelana, Amaziko aDibeneyo kunye nemibutho kunye namanye amaZiko kunye neMibutho epapashwe kwiGazethi yaseburhulumenteni Nomb. 2018 yomhla we-30479 kaJulayi 4, XNUMX [More ...]
Prime Minister Recep Tayyip Erdogan Bestepe National Congress Centre neNkcubeko '2019 Unyaka indlela ethathwa akhankanye kwi kwiNtlanganiso Review wabanika ulwazi malunga kutyalo kaloliwe yezothutho Turkey kaThixo. '' I-2019 kuzo zonke iiloliwe zethu [More ...]
Imibhiyozo iyaqhubeka nokulungelelaniswa e-Ordu ukuphucula imidlalo yasebusika kunye nokhenketho lwasebusika. Kule meko, i-5th Mesudiye kwiPlatfalan-Ulugöl Plateau kwisithili saseMesudiye ngentsebenziswano noMasipala wase-Ordu Metropolitan, uMasipala waseMesudiye noMlawuli weSithili seMesudiye. [More ...]
Ngenxa yokuqalisa kwekhefu lesemester, kukho iintsuku ezisebenzayo kwi-AŞTİ. Kwi-AŞTİ, apho uxinaniso lwabafundi lonyuke khona, uMasipala oMbhaxa wenyusa amanyathelo okhuseleko. IXESHA LOKUFUNDA LOKUFUNDA KWIholide yezikolo e-AŞTİ, eqhutywa yi-BUGSAŞ enxulumene noMasipala weDolophu i-Ankara [More ...]
Ngokusebenzisana noMasipala waseBursa Metropolitan, iBursa Chamber yezoRhwebo neMveliso kunye neTÜBİTAK, imisebenzi iyaqhubeka nomkhuhlane kwiziko i-Gökmen Space kunye neAviation Education Centre (GUHEM), ekucwangciselwe ukuba ivulwe ngo-Epreli-23. [More ...]
Ndiyabulela kwimodeli yezobuchwephesha boQeqsho noQhumelelo oluSebenzayo, i-savedzmir Metro igcine isi-10 sezigidi sombane kwiminyaka eli-6. Izmir zokusebenzisa amandla oqoqosho ngakumbi, yenye yezona zinto zibalulekileyo iindleko zeendlela zikaloliwe [More ...]
I-Balıkesir kaMasipala oMbaxa we-Ofisi yoCwangciso loThutho kunye neendlela zoLoliwe ziyaqhuba neenzame zazo kwizithili ezingama-20 ukuqinisekisa ukuthuthwa kwabemi kwiindlela ezikhuselekileyo. Igunya likaMasipala weNgingqi yaseBalıkesir kunye [More ...]
Impendulo engazukubanelisa abahlali ivela kwiCandelo loMphathiswa Wezothutho malunga nenqanaba lesikhululo seenqwelomoya kunye neeprojekthi zomgaqo kaloliwe abantu base Çorum abalindele ngokuzilangazelela nangomdla. Icandelo loMphathiswa Wezothutho lathi malunga nokusekwa kwesikhululo seenqwelomoya e-umorum. [More ...]
nyaka-60 iphupha Turkey ngayo isixeko yemoto zasekhaya eza kuqhutywa e Bursa, iye wongezelela entsha kumsebenzi wayo nobuchwepheshe ebomini phambili. Umlawuli wezobugcisa kwiDyunivesithi yaseBursa Uludağ UProf. Dr. Mehmet Karahan, Bursa [More ...]
Iplateksa.com ejolise kubuchwephesha bokuthengiswa kwezindlu kunye nokuhlolwa kwamaxabiso entengiso kunye namaxesha atshintshileyo eendawo zokuhlala e-Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Line. Ngokwedatha ye-Endeksa, eyona ndawo yokuhlala irente ngexabiso eliphakathi lentengiso ye-1.038.520 TL iseGöztepe. [More ...]
Xa abashokobezi be-PKK bagqogqa iziqhushumbisi zenziwe ngesandla ngelixa uhambo lwe-Elazig-Tatvan, iinqwelo zoololiwe bezokuphakama zaphakanyiswa emva kweminyaka emi-4. Ibibanjwe nge-30 kaJulayi, 2016 eMasala, kwilali yaseBurgudere kwilali yase-Elazig. [More ...]
Iskele Park kunye ne Kordonu, ezithe zatshiswa ngesiquphe zaza zavalwa eluntwini ngoMatshi wonyaka ophelileyo, bezingamabhodlo ngaphezulu konyaka. Kuthiwa iyakucwangciswa ngokukhawuleza neprojekthi entsha xa itshatyalalisiwe. [More ...]